ASHINSKAYA CHERRY: SAWIRADA IYO SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA IYO ASTAAMAHA - BEERTA
Waxay u dulqaadaneysaa abaar iyo dhaxan daran - noocyo cherry ah Ashinska Stepnaya
Cherry Stepnaya Ashinskaya waxay tixgeliyeen kala duwanaansho isku dhafan oo u dhexeeya geedo iyo jardiinka beerta.
Leeyahay dhalatada xasilloon, ilaa 12 tan oo hektar ah.
Waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan ee dhadhankaaga iyo carafka.
Ashinskaya Cherry ayaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah kuwa ugu fiican - sharaxaadda kala duwan iyo sawirrada dambe ee maqaalkan.
Qeexitaanka kala duwan Stepnaya Ashinskaya
Noocyada cherry budada steppe
Cherry Steppe wuxuu ka yimaadaa nooc dabacsan. Waa warshad kaynta-kore. Waa hagaag xididka cimilada cimilada.
Meelaha miyiga ah, waxaa lagu xafidaa cidhifka kaymaha geedo, caleen, qiiq, qoyaan qallalan iyo duufaan.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira shaqooyin kala duwan oo beereed ah oo ku saabsan dhirta, hagaajinta, dhismaha iyo taranta xoolaha waaweyn.
Sidaa darteed, cherry steppe ma laha fursad ay ku qabsadaan dhulal cusub.
Si cajiib leh loo faafiyo caleemaha. Waa xayiraad hooseeysa dhererka hal mitir iyo hal mitir. Inta badan 0,6-1,1 mitir. Waxay leedahay dhuuban, wax yar kore, caleemaha yar yar oo caleenta caleenta ah oo cufan oo cufan.
Gormeega qaabka kala duwan oo dhadhamiya, oo dharabkeeduna waa midhihiisa. Badanaa waxay cuneen dadwaynaha deggan. Berry on hooska of xoogaa kala duwan - laga bilaabo guduud dhalaalaya ilaa burgundy madow. Lafaha gudaha qashirqaha labada dhinacba waa mid aad u fiiqan, yar yar.
Cherry skoroplodnaya. Fruiting ayaa gali kara sanadka labaad ama saddexaad. Cherry Steppe iska leh jiilaalka-adag tahay. Dhibaatooyinka Xilliga qaboobaha jiilaalka kordhay 47 ilaa 55 darajo Celsius. Waxay ku koraan meesha cherry caadi ah ma qaadan xididka. Waxay leedahay dulqaad sare oo sareeya. Geedku wuu noolaan karaa laga bilaabo 20 ilaa 25 sano.
Buundada baadiyaha ah waxay yeelan kartaa dhowr faashadood oo waaweyn oo ka soo baxa garab gaaban ama nidaamka xididka.
Sidaa darteed, cherry noocan oo kale ah waxaa laga helaa foomka of aeroska cufan cufan. Geedku wuxuu leeyahay caleemo qaawan leh caleemo yaryar.
In midabka, waxay yihiin cagaar dhalaalaya, qaabka lanceolate qaab, qurux badan. Ubaxku waa caddaan ama goosi, saddex ama afar dallado been ah.
Dhererka dhajiska kama badna 25 millimitir. Muddada ubaxku waa dhammaadka Abriil.
Kirilku uma baahna tallaabooyin adag oo khasab ah. Dhimashada dhirtu waxay u wehelisaa hoos u dhaca wax-soo-saarka, joojinta guulaha, hoos u dhaca taajka iyo laanta qalfoofka.
Iyada oo tiro yar oo ah burooyinka fruiting, dhimashada geedka wuxuu dhacaa badanaa badanaa dhakhso. Waxaa loo isticmaali karaa sida dhirta ornamental. Maanta waa dhif iyo naadir. Lagu qoray buugga cas.
Kala duwanaanta beerta cherry ee beerta beerta caadiga ah
Cherry Steppe leeyahay kala duwan iyo qaababka kala duwan ee jeeriga. Beerta beerta Berry oval oo leh geeso wareegsan.
Steppe buundada cherry dhanaan, oo leh tartiib tartiib ah. Dhadarka beeraha ee beerta waa mid fudud. Miraha oo macaan, oo kibis ku cun.
Miro Cherry shrub wuxuu leeyahay midab of xoojin kala duwan - laga bilaabo guduud dhalaalaya ilaa burgundy madow. Cherry caadiga ah leeyahay hooska aamusan, inta badan casaan mugdi ah.
Labada lafo ayaa labadaba tilmaamay, aad u yar. At beerta - oo lagu daboolay hooska shimbiraha, dhumucdiisuna waa 0.4 cm. Lafaha lafaha way wada siman yihiin, ma keenaan jarista afka godka.
In khudradda steppe fruiting ku yimaadaan on sanadka labaad ama sadexaad. At fruiting beerta beerta ayaa dhacda 4 ama 5 sano kadib markaad degto jarida.
Cherry Steppe waxa loola jeedaa ilaa noocyada adag ee jiilaalka. Waxay ilaalisaa dhaxan xilliga qaboobaha ah laga bilaabo 47 ilaa 55 darajo Celsius. At cherry beerta celceliska iska caabinta barafkailaa 48 darajo Celsius.
Cherry Steppe lagu keydiyo geesaha kaynta, kabadhaha iyo dooxooyinka. Gardering waa si fiican loo qaboojiyey in sirqo shakhsi ah, ee geedka bannaanka ee hiwaayadda, beeraha warshadaha iyo wadaagga.
Steppe Cherry geed ayaa ku noolaan kara laga bilaabo 20 ilaa 25 sano. Geedka cherry garden - ilaa 35 sano.
Cherry Bush ayaa yeelan kara dhowr faashood oo waaweyn kuwaas oo ka baxaya nidaamka xididka ama jir yar. Cherry Garden waa hal xarun oo waaweyn.
Wakhtiga ubax ee koonfureed koonfureed loogu talagalay dhammaadka Abriil. Cherry beerta ubaxu waxay dhacdaa dhammaadka Maajo.
Geedka kumbuyuutarku leeyahay caleemo yar. In caleemaha cherry beerta waa xitaa 2-3 jeer ka yar.
Kala duwanaanshaha waxaa lagu geley diiwaanka gobolka ee caalamiga ah horraantii 2002. Waxaa loo arkaa mid guuleysanaya. dhexjir ah oo u dhexeeya steppe (bush) geedka iyo caadiga ah (beerta).
Asalka astaamaha kala duwan waa YUNIIPOK (Machadka Cilmi-baarista ee South Ural ee Beeraha iyo Bataatada).
Aqoonyahanada cilmi-baarayaasha: Anastasia Efimovna Pankratova, Kabir Kadirovich Mullayanov, Vladimir Ilyich Putiagin, IG Zamyatin
Isku mid ahaanshaha geedka tallaabada: geedo.
Kala saarida noocyada kala duwan ee dhammaan noocyada jira: gooynta, caleemaha, godadka iyo maroojinta. Waxaa si wacan loo xirxiray bandhigyo shakhsiyeed, geedka geedka beeraleyda ee hiwaayadda, beeraha warshadaha iyo beeraha. Waad la kulmi kartaa ee Aasiyada Yar iyo Bartamaha Yurub.
Waxaa si ballaaran loo qaybiyaa guud ahaan wadamada Ruushka iyo wadamada CIS. Geedka waa caadi Gobolka Ural, Kawaanka, Kubaan, gobolka Volga, Nizhny Novgorod, Rostov, Voronezh, Yaroslavl.
Noocyada noocan ah sida Turgenevka, Kharitonovskaya, Fairy iyo Chernokorka si fiican ayey u koraan gobolladan.
Caawin GNU YuUNIIPOK waa mid ka mid ah ururrada cilmi-baarista ugu fiican ee tiknoolajiyada beeraha iyo warshadaha beeraha ee Ural. Halkan waxaa ku yaal noocyo kala duwan oo ah baradho, miro iyo miraha miraha.
Machadka waxaa ku jira 92 awooda qoraallada, waraaqaha, shahaadooyinka hindisaha iyo horumarinta sayniska.
Cilmi-baarayaashu waxay horumarinayaan nidaam isku-dhafan oo loogu talagalay iska-caabbinta abaaraha, iska-caabbinta barafowga, midhaha iyo wax-soo-saarka.
Cilladaha ubaxyada iyo burooyinkeeda guga ilaa qabow iyo difaaca korodhka ayaa la baabi'iyaa.
Mowduucyada qiyamka ee u adeega inay abuuraan farshaxan sare, tiknoolajiyado sare, guulo dhaqameed ayaa lagu muujiyey. Horumarinta Machadka waa mid aad u qiimo badan oo ku saabsan beeralayda hiwaayadaha adduunka oo dhan.
U fiirso si gooni ah muuqaalka muuqaalka geedka miraha iyo miraha naftooda.
Heerka wax soo saarka ee Chines-ka Ashinska ayaa sarreeya. Kala duwan ayaa leh geed qurux badan oo cufsan, inta badan maqnaanshaha taajka. Geedku wuxuu leeyahay celceliska celceliska ayaa gaaraya 2.6-3.1 mitir dhererka. Boomgu wuxuu u dhigmaa 20-45 sentimitir.
Miyuu yahay geed iyo si dhakhso ah u koraya. Taajirka cherry waa mid qaro weyn, qaababka dhejiska ah, oo aad u dheer. Waxay leedahay caleenta wanaagsan. Isku day inaad caleenta adkeyso.
Kalluumeysiga ayaa ah oval-wareegsan, oo aan lahayn dhawaaqyo. Midabka waa midab-buni leh oo leh hooskii silvery. Dhexdhexaadku wuxuu gaari karaa 30-45 sentimitir. Nummer dhexe oo leh qadar yar. Keli-kicin, aad u dheer, dhexdhexaad ah. Qoryaha kelyaha ayaa leh dusha si siman.
Caleenta cagaaran waa madow cagaaran. Qaabku waa wareegsan yahay, dhuuban yahay, qulqulaya, oo leh jajab yar.
Waxay leedahay qaab muuqaal gaaban ah iyo saldhig fiiqan oo leh geeska biconcave ee caleen. Dhererka, xaashida ayaa la gaaraa 8 sentimitir ballaaran - 4 sentimitir.
Dareemidu waa maqan tahay. Waxay leedahay midab guduud ah oo dabacsan, oo ku saleysan hannaanka anthocyanin uu joogo. Qanjidhada qafiifka ah-jaalaha ah, cufan-yar oo wareegsan, yar yar. Caleen waxay leedahay nabar gaaban, oo gaarto celcelis ahaan 1.8 sentimitir. Qaybaha kala duwan ee kala duwan ayaa ka maqan.
Midhaha Ashinsaya Cherry casiir leh, waaweyn. Oval qaab qaabka geesaha wareegsan. Qaybta madaxbanaan ee berry ayaa si yar u jilcan dhinaca sare. Intaas waxaa ku yaal cherry waxaa jira jeex yar. Khadka xayawaanka cagaaran waa mid aad u tabar daran. Dusha sare ee berry waa oval oo leh jilbaax jajab ah. Miraha miisaanka ayaa gaaraya 4.1-4.9 garaam.
Haysashada hoos maroon maroon. Bullundi naxwaha leh casiir dhalaalaya. Maqaarku wuu dhalaalayaa, cufan, laakiin si fudud ayaa loo cunaa. Cufnaanta ayaa jilicsan. Geedka miraha waa mid dheer, oo gaaraya 4 sentimitir.
Qaabka tooska ah, kosospostavlennaya, khafiif ah. Kala soocida nooca berry ah ee saldhigga ah ee asliga ah qalalan - iyada oo aan waxyeello iyo dillaac. Muuqaalka muuqaalka miraha waxaa lagu qiyaasey 4.7 dhibcood 5 suuragal ah.
Si aad u dhadhamiso cherry macaan, oo leh dushiisa yar. Farxad dhadhanka qoobka ayaa lagu qiimeeyay 4.5 dhibcood 5tii. Waa mid ka mid ah noocyada ugu wanaagsan si ay u dhadhamiyaan iyo caraf udgoon ee caraf udgoon.
Dareemka weyn waxaa sidoo kale lagu muujiyay Black Cajiibada, Minx, Girl Chocolate iyo Shubinka.
Beeralayda kala duwan loo yaqaan macmacaanka. Laakiin waxa uu tilmaamayaa universal.
Waxaa si weyn loo isticmaalaa soo saaridda muusikada, ilaalinta, casiirada dufanku ku badan yahay. Berry maraq loo isticmaalo gastralgia iyo qandho. Thanks to qadar yar cobalt, nikkel, naxaas iyo birta, hagaajineysaa gobolka caafimaadka iyo sameynta dhiig.
Arrinta qallalan 16,3-17%
Aashit la'aan 1,8-2%
Ascorbic acid 10,3- 10,8%
Faa'idada jidhka ku leh dhiig-yaraan. Saameyn fiican oo ku saabsan mareenka caloosha iyo mindhicirka. Ka saara jeexjirrada nitrogenous jirka bini'aadamka. Waxay ka kooban tahay walxaha jimicsiga. Miraha xabagta waxaa ku jira walxo bakteeriyaal ah.
Dhagaxyada berry ah waxaa lagu soo koobay hooska shimbiraha, 0.4 cm qaro weyn. Dhererka dhererka 0.6 sentimitir, dhererka 0.5 sentimitir.
Si fiican u kala soocaa saxarka. Lafaha lafaha way wada siman yihiin, ma keenaan jarista afka godka.
Goobta duleelka ah waa mid sahlan, calooshuna waa dhexdhexaad. Cabbirka dhagaxa way kala duwanyihiin 0.17 illaa 0.20 grams. Laga soo bilaabo mass ee jeeriga waa 8-10%.
Qeybo kala duwan si ay u noocyada dhirta qudheeda. Qayb ahaan si iskood ah ayuu u rogrogmi karaa. Wakhtiga ubax ee geedo cherry waa dhexdhexaad, waqti gaaban. Ubaxa May 20-31. Faafinta ayaa aad u gaaban. Ubax waa mid yar, oo leh caraf udgoon oo jilicsan, 5 ama 6 gogo 'hal inflorescence.
Petals waa mid ballaaran, oval qaab ah, ballaaran leh qayb ka mid ah qaybta sare. Si toos ah u taabasho, iyada oo aan shirqool. Calyx ayaa kor ugu kacday xagga sare, gambaleelka, wuxuu leeyahay qadar yar. Nooca loo yaqaan corolla waa miro-yarad. Stamens waxay ku taallaa sarbeebta pistil.
Tirada stamens waxay gaartay 26 qaybood. Yaryar oo aan lahayn fuuqbaxyo iyo laf-dhabarka. Foomka ubaxa iyo dhalidda isku dhafan.
On a 3 sano geed geed dabaylaha bouquet, waxay gaareysaa 30%. On sapling 1-sano jir wuxuu gaari karaa 70%.
Yield xasilloon, sannadlaha, aad u sarreeya. Midhaha ah ee Bisaylkiisa dambe. Buuxa buuxda ayaa la gaaraa horraantii Agoosto. Miraha leh Bisaylkiisa siman. Berry oo leh roobab culus ayaa kuxirta.
Noocyada soo socda sidoo kale waxay leeyihiin wax-soo-saarka wanaagsan: Volochaevka, Vianok, Generous iyo Griot Moscow.
Fruiting waxay dhacdaa 4 ama 5 sano ka dib markii laga beerto geedo goynta. Geedka keliya si guul leh u dhex maraan ilaa 35 sano.
Waxsoosaarku wuu kala duwan yahay laga bilaabo 8 illaa 10 kiilo garaam hal geed. Laga soo bilaabo hal hektar oo beer ah ayaa soo uruuriya laga bilaabo 10 ilaa 12 tan oo goos goos ah.
Geedo Cherry ah waxay u dulqaadaneysaa abaar. Cabbiraadda barafku waa celcelis ahaan, si looga saaro 48 darajo Celsius.
Cadaadiska dhaxan ee daran midho leh kelyo xilliga qaboobaha - celcelis ahaan. Cadaadiska inflorescences iyo burooyinkeeda dhirta xooggan xilliga gu'ga waa waxoogaa ka sarreeya celceliska.
Nidaamka xididku wuxuu gaarsiiyaa calaamad saddexda ah.
Muuqaal aad u kala duwan oo kala duwan ayaa ah dib u soo celinta deg-degga ah ee nidaamka xididka ka dib markii lagu keydiyo ka soo jiilaalka qaboobaha kulul.
Kala duwanaanta faafinta waxay ku dhacdaa dhammaan siyaabaha jira.: gooynta, caleemaha, dhagaxyada iyo adoo raacaya. Habka ugu fudud ayaa ah dhalashada by saplings. Tan iyo horraantii Juun, bannaanka u diyaariyaan caleemaha. Xulo midab guduudan, adoo adkaynaya salka.
Dhererka caleemaha la gooyey waa in ka badan soddon sentimitir. Geedoonida lafteeda ayaa la sameeyaa fiidkii ama subaxa hore. Waxaa fiican inaad doorato cimilada qaboobaha. Iska yaree cawska si degdeg ah meelo biyo ah. Wixii soo baxay ee nidaamka xididka isticmaali xakamaynta kiimikada.
Qalab fiican heteroauxin. 100 ml xal la badhxay biyo qabow iyo khamriga aalkolada. Gooynta la xirxiray oo lagu darey isku dhafka mugga 1 litir siddeed iyo toban saacadood.
Boodhka laftiisa laftiisa waa inuusan ka badnayn 1,5 sentimitir. Si aad u gudubto nidaamkaan, waxaad ka iibsan kartaa geedo diyaarsan ee geedaha ama suuqa.
Ciidda beeritaanka waxaa loo diyaariyey horay. Way socotaa qari, ka saar haramaha iyo samee sariiraha. Qodobbadu waxay buuxiyaan peat iyo ciid lakabka 10cm. Top ayaa ku shubtay ciid webi aan ahayn. Dhammaan lakabyada waxay la jaanqaadaan qalabyada si adagna ujooga.
Dabadeedna waa u baahan tahay biyo badan oo ka badan ciidda iyo quudinta superphosphate - bacriminta macdanta.
Mid ka mid ah shaaha oo ah bacriminta lagu qasi jiray 10 litir oo biyo ah heerkulka qolka.
Gooyn ayaa lagu beeray si aan caadi aheyn. Masaafada u dhexaysa geedo waa inay noqotaa aan ka yarayn 7 sentimitir. Qoto-dheereynta - aan ka badnayn 3 sentimitir. Dhirta mustaqbalka waxaa lagu daboolaa caag balaastiig ah, kaas oo bixiya daryeel iyo badbaado qorraxda badan.
Wixii geedo yar yar waa in ay ahaadaan kuwo si taxaddar leh u waraabiyo dhuxusha. 14 maalmood ka dib markii la beerto, xididdada maskaxdu waa inay ka muuqdaan dhalmada. Ka dib 30 maalmood - si dhib leh u rujin.
Waxay leedahay iska caabin badan oo cudurro kala duwan ah. Kala sooc xasiloonida wadnaha. Cudurrada kale ee fungal, ma jiraan dhaawacyo gaar ah oo la arkay.
Sida laga soo xigtay xogta imtixaanka ka socota Bulshada Mawxida Maqalka ee Moosko (MOIP), noocyo kala duwan Chines Ashinsaya ayaa ahaa kuwa ugu adkaysta cayayaanka iyo cudurada.
Dessert Morozova, Zhukovskaya, Igrushka iyo Lebedyanskaya waxay sidoo kale u adkeysanayaan cudurrada qaarkood.
Dhibaatooyinka cayayaanka iyo cudurada kala duwan lama aqoonsan.
Natiijada Stephane Cherry Steppe wuxuu leeyahay dhadhan fiican, miro leh oo casiir ah oo midab dhalaalaya. Waxaa si weyn loo adeegsadaa warshadaha diyaarinta miirka khudradda, jamciyada, kutlada. Waxay leedahay dal dal oo xasilloon iyo marwalba siman. Beerta jecel ee beerashada aan qabin.
Dheef-abuurka wuxuu ku dhacaa dhammaan siyaabaha jira. Waxay leedahay iska caabin aad u sareysa abaarta iyo cuduro kala duwan. Kala duwanaantu ma aha mid u nugul cocomycosis. Waxay midho dhalin kartaa 4 ama 5 sano kadib markaad degto jarida. Waxay leedahay muddo dheer ilaalinta qoryaha - ilaa 35 sano. Waxaa si ballaaran loo qaybiyaa guud ahaan wadamada Ruushka iyo wadamada CIS.
Fiiri fiidiyowga ku saabsan noocyada geedaha (steppe) ee kala duwan ee jeeriga